Wararkii ugu Dambeeyey afgembigii Turkiga & Taliye cusub oo loo magacaabay ciidanka dalkaas (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Raisul wasaaraha dowlada Turkiga ayaa taliye cusub oo ku meel gaar ah u magacaabay ciidamada wadankaas ka dib markii xalay wadankaas uu ka dhacay inqilaab dhicisoobay.
Taliyaha cusub ayaa magaciisa lagu sheegay Umit Dundar, iyadoo talaabadan ay timid markii taliyihii hore ee ciidanka wadankaas xaalkiisa la bixin waayey.
Dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya wadankaas, waxay sheegayaan in la xirxiray ku dhowaad 1,500 oo askari oo ka mid ahaa ciidankii Iqilaabka isku dayey.
Wakaalada wararka Turkiga ayaa sheegtay in shaqada laga eryey shan Janaraal iyo 29 korneyl oo ka tirsanaa ciidamada wadankaas.
Xaalada wadanka ayaa soo hagaageysa, ka dib markii ay is dhiibeen inta badan ciidanmadii afgembiga isku dayey, waxayna wararku sheegayaan in ciidamo ka tirsan kooxda afgembigu ka fashilmay ay weli heystaan dhowr dayuuradood oo helicobter ah.
Madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan ayaa wacad ku maray in ciqaab adag la marin doono ciidamadii ku lugta lahaa isku daygan inqilaab ee dhicisoobay.
Ciidamadii watay taangiyada ayaa badankood laa qabqabtay markii shacab careysan ay is hor-taageen, waxaana la arkayey saaka shacab dul dhooban taangiyada dariiqyada looga tegay ee ay wateen askartii guul-dareysatay.
Waxaa hawada dib ugu soo laabtay telefishinka ay dowladda leedahay ee TRT, kaasoo ay ciidanka gadoodsan ka jeediyeen fariintooda xalay Weriyaha warka baahisay ayaa sheegtay in qori lagu hayay markii ay akhrineysay laguna qasbay iney warka baahiso.
Baarlamanka wadanka Turkiga oo xalay xaruntiisa la duqeeyey ayaa maanta kulan deg deg ah ka yeelanaya xaalada wadanka ka jirta, waxaana weli kacsan xaalada wadankaas inkastoo inqilaabkii la isku dayey uu fashilmay.
Daawo Sawirada” Shacabka Turkiga oo bilaabay in ay Garaacaan Askartii ku fashilantay Afgembiga